Last nohavaozina: Jan. 05 2018 | 2 min namaky
Raha ny aterineto mampiaraka, ny fiarahana no zava-dehibe ny mombamomba. Manana mba hahazoana antoka ianao anisan'izany ny fampahalalana manan-danja momba ny tenanao koa, fa ianao te-hitandrina izany vaovao sy mahaliana. Sady koa anie, ianao no te-hiavaka!
Ireto misy soso-kevitra momba ny zavatra tokony tsy mametraka eo amin'ny aterineto ny mombamomba mampiaraka:
Bad / tsy mendrika Photos
Fa ndao hatrehina izany-no mianatra voalohany momba ireo zava-drehetra, ary raha ny mombamomba sary dia sary avy aminareo shotgunning ny labiera na flipping eny ny fakan-tsary, mba hanoherana eny mety daty. Na dia mety kokoa naka sary, miezaka ny fisorohana ny sary izay Mason'ny, fa lavitra loatra fa tsy afaka mahita ny tavany aminareo, na manao solomaso. Ny sary tsotra tena anao mitsiky no fahagagana.
Matetika ny fahadisoana tsipelina sy ny Fitsipi-pitenenana
Tsy ny olona rehetra dia mpanohana ny fitsipi-pitenenana ary izany no tonga lafatra tsara. Na izany aza, raha ny mombamomba dia littered amin'ny fomba fanoratra sy ny fitsipi-pitenenana diso, dia mety ho ny olona minia noho ny mombamomba tsy ampisalasalana na. Mihazakazaka ny fototra tsipelina maso ny alalan 'ny mombamomba hisambotra misy fahadisoana lehibe. Soso-kevitra koa aho fa tsy mampiasa fanafohezan-teny sy ny teny lingo (toy ny hoe "Oran'ny" fa tsy "ny" na "BC" fa tsy "satria") toy ny mila ny mombamomba ny ho toy ny mazava sy fohy araka izay azo atao.
Maneno toy ny olon-drehetra
Taonina ny olona tia mamaky boky, Tsangatsangana, hankany amin'ny sarimihetsika, mampihatra ary hiala ny sakafo hariva. Raha toa ianao ka tena liana amin'ny zavatra sasany, toy ny lavitra, hamelabelatra bebe kokoa amin'ny antony toy izany, izay efa, ary izay te-handeha. Afaka manampy lasa resaka Starter raha manome tsipiriany bebe kokoa. Azonao atao koa ny miezaka miresaka momba ny zavatra tsy manam-paharoa kokoa momba ny tenanao. Hey, na oviana na oviana ianao hoe iza koa no mety tia tanimanga kilasy na spelunking!
Mandainga About Small Details
Tsy mahagaga fa tianao ny fisehosehoana ny toetra tsara indrindra eo amin'ny mombamomba ny tena manokana, fa mandainga ny tsipiriany, na dia ny kely, dia ratsy hevitra. Mandainga momba ny hahavony, ny lanja na ny taona, dia mety ho toy ny tena olana tamin'ny voalohany, fa raha mifanena amin'ny farany ny daty no nihaona an-tserasera, mba horaisina tampoka sy manomboka manontany tena momba ny inona koa no nandainga momba ny. Manao ny marina no tsara indrindra politika.
Kely loatra ny miresaka na Too Be
Tsy misy olona te-hamaky tantara fohy, rehefa mamaky ny mombamomba mampiaraka an-tserasera. Rehefa lava loatra ny mombamomba, maro ny olona maro mba handresy ary tsindrio eo amin'ny profil amin'ny manaraka. Ny Toy izany koa ny mombamomba izay fohy loatra. A profil manazava amin'ny antsipirihany mikasika ny tenanao ao amin'ny fehezan-teny iray na roa mety hahatonga anao tsy liana mijery. Fitadiavana fitaovana tonga lafatra eo amin'ny roa no fototra, ka an-tsipiriany foana ny mombamomba sy ny teboka.